तीव्रगतिमा कार चलाउँदा १४ हजार जरिवाना, मुद्दा लड्दा ४३ लाख खर्च Bizshala -
तीव्रगतिमा कार चलाउँदा १४ हजार जरिवाना, मुद्दा लड्दा ४३ लाख खर्च
काठमाण्डौ । करिब तीन वर्षको घटना हो । बेलायतको ब्रिस्टल सहरमा निर्धारित गति उल्लंघन गर्दै तीव्रगतिमा कार चलाएको भन्दै स्थानीय ७१ वर्षीय रिचर्ड किडवेलको घरमा नोटिस आयो । नोटिसमा तीव्रगतिमा कार चलाएको भन्दै रिचर्र्डलाई १४ हजार रुपैयाँ (१०० पाउन्ड) जरिवानाको रसिद पठाइएको थियो ।
रिचर्ड माथि ४८ किलोमिटर प्रतिघन्टा स्पिड जोनमा ५६ किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा कार चलाएको भन्दै जरिवाना गरिएको थियो । तर रिचर्डलाई विश्वास थियो उनले निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा कार चलाएका छैनन् ।
रिचर्डले यो नोटिसविरुद्ध करिब तीन वर्ष अदालतमा मुद्दा लडे । अदालतमा मुद्दा लड्दा उनले तीन वर्षको अवधिमा करिब ४२ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । जसमा करिब २९ लाख वकिलको फिसमा र बाँकी रकम अदालती प्रक्रियामा सकेका छन् ।
ब्रिस्टलनजिकै येटमा बसोबास गर्ने रिटार्यड इन्जिनियर रिचर्डको दाबी छ कि सन् २०१६ नोभेम्बरको रात उनले निर्धारित ४८ किलोमिटर प्रतिघन्टाकै गतिमा कार चलाएका थिए । तर निर्धारित गति उल्लंघनको आरोपमा नोटिस पाएपछि उनी हैरान भए ।
रिचर्डले प्रहरीकोमा गएर यो नोटिसको कुनै जबाफ नदिने बताए । उनका वकिलले जुन क्यामेरामा उनको करको छवि देखिएको थियो, त्यो चलिरहेको थियो । तर रिचर्डले क्यामेराको रेकर्डिङमा गल्ती हुन सक्ने भन्दै नोटिसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लड्ने प्रण लिए ।
रिचर्डले अहिले मजिस्ट्रेट अदालतमा मुद्दा हारेका छन् । उनले हालै उच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अब फैसला जेहोस् तर मैले थुप्रै रकम गुमाइसकेको छु । म यो कानुनी उल्झनमा फसेर थाकिसकेँ ।’ –एजेन्सी
fine for overspeed
हावा, पानी र बिजुलीको समिश्रणबाट खाद्यपदार्थ तयार, विश्वबाट
काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तन भयावह स्थितिकै कारण विश्वका कतिपय...
पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी सूत्रहरु
काठमाण्डौ । आफूले परिश्रम गरी कमाएको पैसा बचाउन ठूलै मेहनत, आर्थिक...
केटाकेटीमा इन्टरनेटको लत भयावह, बनाउँछ एकलकाँटे र पढाइमा
काठमाण्डौ । डिजिटल प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै हिजोआज मानिसको...
यस्तो छ विश्वकै सबैभन्दा महँगो रक्सी, मूल्य थाहा पाउँदा
काठमाण्डौ । युरोपेली मुलुक हंगेरीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल...
अपनाउनुहोस् यी ५ तरिका, मेटाउनुस् आर्थिक अवस्थाबाट उत्पन्न
काठमाण्डौ । प्रायः मानिस आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई लिएर निकै चिन्तित...
बैंकिङ ठगीबाट बच्न ग्राहक पनि सचेत हुन आवश्यक, अपनाउनुस् यी ६
– धर्म मलासी काठमाण्डौ । ग्राहकले सुरक्षित स्थान ठानी बैंकमा...
सानैदेखि केटाकेटीमा कसरी वित्तीय अनुशासन विकास गर्ने ?
काठमाण्डौ । वित्तीय अनुशासनका बारेमा आफ्ना छोराछोरीहरुलाई कम...
नेपालमै पहिलोपटक ‘पार्टी बस’ भित्रियो, यस्ता छन् मनोरञ्जनका
– धर्म मलासी काठमाण्डौ । नेपालमा पहिलोपटक ‘पार्टी बस नेपाल’...